Bhuku Rechipiri reMadzimambo 22:1-20
Josiya, mambo weJudha (1, 2)
Mirayiridzo yekugadziridza temberi (3-7)
Bhuku reMutemo rinowanikwa (8-13)
Uprofita hwaHuridha hwedambudziko (14-20)
22 Josiya+ aiva nemakore 8 paakava mambo, uye akatonga kwemakore 31 muJerusarema.+ Amai vake vainzi Jedhidha mwanasikana waAdhaya wekuBhozkati.+ 2 Akaita zvakarurama pamberi paJehovha uye akafamba nenzira dzese dzatateguru vake Dhavhidhi,+ haana kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe. 3 Mugore rechi18 raMambo Josiya, mambo akatuma Shafani munyori, mwanakomana waAzaria, mwanakomana waMeshuramu kuimba yaJehovha+ achiti: 4 “Enda kumupristi mukuru Hirikiya,+ uye ngaatore mari yese iri kuunzwa muimba yaJehovha,+ yakaunganidzwa nevachengeti vemasuo kubva kuvanhu.+ 5 Ita kuti vaipe vaya vakagadzwa kuti vatungamirire basa muimba yaJehovha, avo vachaipa vashandi vari muimba yaJehovha vachagadzira nzvimbo dzakatsemuka* dzeimba yacho,+ 6 kureva mhizha, vavaki, nevanhu vanovaka nematombo; uye vanofanira kuishandisa kutenga matanda nematombo akavezwa kuti vagadziridze imba yacho.+ 7 Asi havafaniri kubvunzwa mashandisiro avachaita mari yacho yavanopiwa, nekuti vakavimbika.”+ 8 Gare gare mupristi mukuru Hirikiya akati kumunyori Shafani:+ “Ndawana bhuku reMutemo+ muimba yaJehovha.” Saka Hirikiya akapa Shafani bhuku racho, akatanga kuriverenga.+ 9 Munyori Shafani akabva aenda kuna mambo akamuudza kuti: “Varanda venyu vadurura mari yanga iri mumba, uye vaipa vaya vakagadzwa kuti vatungamirire basa muimba yaJehovha.”+ 10 Munyori Shafani akaudzawo mambo kuti: “Pane bhuku+ randapiwa nemupristi Hirikiya.” Shafani akabva atanga kuriverenga pamberi pamambo. 11 Mambo paakangonzwa mashoko ebhuku reMutemo, akabvarura nguo dzake.+ 12 Mambo akabva arayira mupristi Hirikiya, Ahikamu+ mwanakomana waShafani, Akibhori mwanakomana waMikaya, munyori Shafani, naAsaya mushandi wamambo, achiti: 13 “Endai munondibvunzira Jehovha, ini nevanhu, nevaJudha vese, pamusoro pemashoko ebhuku iri rawanikwa; nekuti kutsamwa kwaJehovha uko kwatungidzwa patiri kukuru,+ nekuti madzitateguru edu haana kuteerera mashoko ebhuku rino, paasina kuchengeta zvese zvakanyorwa pamusoro pedu.” 14 Saka mupristi Hirikiya, Ahikamu, Akibhori, Shafani, naAsaya vakaenda kumuprofitakadzi Huridha.+ Aiva mudzimai waSharumu mwanakomana waTikvha mwanakomana waHahasi uyo aiona nezvenzvimbo yaichengeterwa nguo. Aigara kuRutivi Rutsva rweJerusarema; uye vakataura naye ikoko.+ 15 Akati kwavari: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Udzai murume akutumai kwandiri kuti: 16 “Zvanzi naJehovha, ‘Ndichaunza dambudziko panzvimbo ino nevagari vayo, iwo mashoko ese ebhuku raverengwa namambo weJudha.+ 17 Kutsamwa kwangu kuchatungidzwa panzvimbo ino uye hakuzodzimwi+ nemhaka yekuti vakandisiya uye vari kuita kuti zvibayiro zvipfungaire kune vamwe vanamwari,+ vachindigumbura nebasa rese remaoko avo.’”+ 18 Asi muti kuna mambo weJudha akutumai kuzobvunza Jehovha, “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: ‘Kana ari mashoko awanzwa, 19 mwoyo wako zvawateerera,* ukazvininipisa+ pamberi paJehovha pawanzwa zvandakataura pamusoro penzvimbo ino nevagari vayo, kuti vachava vanhu vakatukwa uye vanhu vanovaona vacharohwa nehana, uye iwe wabva wabvarura nguo dzako,+ ukachema pamberi pangu, iniwo ndakunzwa, ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 20 Ndokusaka ndichakuisa kwakaiswa madzitateguru ako,* uye ucharadzikwa muguva rako nerugare, uye maziso ako haazooni dambudziko rese randichaunza panzvimbo ino.’”’” Vakabva vadzokera nemhinduro yacho kuna mambo.
^ Kana kuti “dzakapazika.”
^ ChiHeb., “zvawapfava.”